Etu ị ga-esi weghachite mgbagha Debian / Ubuntu na steeti ya | Site na Linux
Etu ị ga-esi weghachite mgbagha Debian / Ubuntu na steeti ya
Ndị ọrụ na-anwale ọtụtụ ngwa, wụnye ọtụtụ nchịkọta ma mee ọtụtụ mgbanwe na distros anyị iji nwalee ya, melite ya ma ọ bụ naanị maka ọ funụ, mgbe ụfọdụ anyị na-ejedebe sistemụ arụmọrụ na ọtụtụ ihe arụnyere na nke m ọtụtụ oge na nchịkọta na-adịghị ** ** echiche mgbe ma ọ bụ maka ị rụnye ha. N'otu aka ahụ, oge ụfọdụ anyị na-ahọrọ ịlaghachi n'ọnọdụ mbụ nke distro anyị iji bido ncha, iji mee ka usoro mweghachi a dị ngwa, ngwa dị mma iji weghachite distro dabere na Debian / Ubuntu.
1 Gịnị bụ Tọgharia?
2 Tọgharia Atụmatụ
3 Olee otú iji wụnye Resetter?
4 Etu ị ga-esi weghachite distro Debian?
Gịnị bụ Tọgharia?
Ọ bụ ngwa ọrụ mepere emepe, nke emepụtara na eke na pyqt nke na-enye anyị ohere iweghachi Debian ma ọ bụ Ubuntu nke gbagọrọ agbagọ dị ka ọ dị na mbụ, na-enweghị mkpa iji onyonyo distro ma ọ bụ usoro mwepụ ihe ngwugwu na ihe ndị ọzọ.
Iji weghachite distro anyị, ngwá ọrụ ahụ na-eji mmelite mmelite nke nkesa ọ bụla nke jiri ya tụnyere ndepụta nke nchịkọta ndị dị ugbu a, a na-ewepụ ngwugwu arụnyere na nke gosipụtara na enwere ike ịwụnye ya n'ọdịnihu.
Ngwaọrụ a na-azọrọ na ndị otu mmepe ya na ọ dabara na distros ndị a,
Mint nke Linux 18.1 (nwalere m)
Mint 18 Mint Linux
Mint 17.3 Mint Linux
Isi OS 0.4
Linux miri emi 15.4 (pEzuru m)
Ngwaọrụ mepere emepe, yana nkwado dị elu yana ọkwa kwụsiri ike.
Mfe iji wụnye na iji.
Na-enye gị ohere ịmepụta ndepụta nke ngwa ịchọrọ ịwụnye mgbe ịghachitere ụdị nke distro gị.
Ọ na-ekwe nchekwa nke a oyiri nke ala nke gị ugbu a distro, na nke ga-eme n'ọdịnihu na ị nwere ike iwunye ngwa nke kwuru oyiri.
Mfe ntinye nke PPA site na ngwa.
Onye editọ PPA dị ike, nke na - enye gị ohere ịkwụsị, rụọ ọrụ ma hichapụ PPAS maka onye ọrụ ọ bụla na sistemụ ahụ.
Dị iche iche echichi nhọrọ.
Manual na akpaka nrụpụta mode.
Enwe ike iwepu nkpuru ochie.
Na-enye gị ohere ihichapụ ndị ọrụ na akwụkwọ ndekọ aha ha.
Olee otú iji wụnye Resetter?
Ingwụnye Resetter dị mfe, anyị ga-ebudata faịlụ .deb kwekọrọ na ụdị ọhụrụ ebe a. Wee wụnye .deb ngwugwu dị ka ọ dị na mbụ, ka ị wee malite ịnụ ụtọ ngwa ahụ.
N'otu aka ahụ, a na-atụ aro na tupu ịwụnye Resetter budata ngwugwu tinye-apt-key na wget na iwu na-esonụ wget -c http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/a/add-apt-key/add-apt-key_1.0-0.5_all.deb biko biko wụnye ya na gdebi site na ime iwu ndị a sudo gdebi add-apt-key_1.0-0.5_all.deb
Etu ị ga-esi weghachite distro Debian?
Anyị nwere ike iweghachite ihe mgbakwasị ụkwụ Debian / Ubuntu na Resetter ngwa ngwa na ngwa ngwa, mgbe anyị na-agba ọsọ ọ na-achọpụta ngwa ngwa nke distro anyị na njirimara ya yana mmelite gosipụtara. N'otu ụzọ ahụ, ngwá ọrụ ahụ na-egosi anyị nhọrọ atọ ga - enyere anyị aka ịrụ ụfọdụ ọrụ anyị zuru ezu n'okpuru:
mfe awụnyere: Ọ na-enye anyị ohere ịmepụta ndepụta nke ngwa ndị a ga-arụnye mgbe ịghachitere usoro gị, ma ọ bụ maka ntinye nke ngwugwu n'ọdịnihu.
akpaghị aka nrụpụta: Na-enye ohere nke iweghachi ihe mgbakwasị ụkwụ Debian / Ubuntu na-akpaghị aka, ọ ga-eme mweghachi ọ bụla, na-ewepụ ndị ọrụ na akwụkwọ ndekọ ụlọ yana ịme ndabere.
nrụpụta omenala: Ọ na-enye anyị mweghachi ahaziri iche, ebe anyị nwere ike ịhọrọ ppa anyị chọrọ ịwụnye, ndị ọrụ na akwụkwọ ndekọ aha anyị chọrọ iwepụ, kpochapụ kernel ochie, ngwa iji kpochapụ n'etiti ndị ọzọ.
Ozugbo ahọpụtara nhọrọ ọ bụla ekwuru n’elu, anyị kwesịrị ịgbaso ntuziaka ndị dị mfe nke ngwa ọrụ na-egosi.
Anyị na-atụ anya na site na ngwaọrụ a ị nwere ike nweta nsonaazụ dị mma, na-atụ aro iji ya rụọ ọrụ tupu nnwale na gburugburu mmepe. Ichekwa ozi ahụ n'ụzọ nke aka gị dịkwa mma.
Ọ dị mma ịmara na usoro akpaka nke ngwa a mere nwere ike iji iwu dị mfe mee, mana na nke a bụ ụzọ dị irè iji mee ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Etu ị ga-esi weghachite mgbagha Debian / Ubuntu na steeti ya
Ọ dị njọ na ọ bụghị maka Fedora, m na-agagharị n’etiti Kubuntu na Fedora na ọtụtụ oge m na-ahụ ezigbo ngwaọrụ maka Fedora ma ọ bụghị maka Ubuntu na otu ọzọ.
Zaghachi Kacike Techotiba
Ngwaọrụ magburu onwe ya, GNU Linux dị ndụ.
Mgbe ahụ, m ga-etinye ya iji hụ etu
Zaghachi Juan Luque
Ozi ezughi oke, usoro ntinye abụghị .deb
Ọ ga-abụrịrị na ha nwere nsogbu ịgụ akwụkwọ ahụ, tupu ha ezipụ ...
Wụnye site na faịlụ deb ahụ hụrụ Ebe a.
A ga-emepụta PPA na Fraịde a ma ọ bụ izu ụka a.
Ọ dị mfe ịwụnye faịlụ ọ bụla ụgwọ site na gdebi, karịsịa na elementrị os na-enweghị ụzọ eserese nke ịwụnye faịlụ nkwụ.
Na ọnụ, na-agba ọsọ sudo apt install gdebi.
- Linux miri emi adịghị dabere na ubuntu ma na debian yabụ ụfọdụ modulu adịghị na ndozi ha na ndabara.
Maka Linux Deepin Users
Tupu ịwụnye Resetter, weta ihe mgbakwunye mgbakwunye-iji wget -c http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/a/add-apt-key/add-apt-key_1.0-0.5_all.deb ma wụnye ya sudo gdebi add-apt-key_1.0-0.5_all.deb
Zaghachi Edwar Damas
Ndoo ma na a na enwere .deb iji wụnye ya na ntughari obula nke Debian.
Enwere m nnukwu nsogbu m nwere olile anya na mmadụ nwere ike inyere m aka ... Ana m achọ idozi Elementary OS, m ga-akọwa nkenke ihe mere, m na-ehichapụ PPA m arụnyere ma na njedebe ejighị m, yabụ m kpebiri iwepụ ha, emehiere m ma hichapụ ihe ndị ọzọ m na-ekwesịghị, weghachite ụfọdụ na M rụziri na ọnụ (ọ ka na-arụ ọrụ nkịtị, na-enweghị nsogbu ọ bụla), mgbe ahụ, m malitegharịrị OS mana mgbe sistemụ na-ebugharị ya agaghịzi agafe akara ngosi ahụ. Gbalịa site na mgbake nke elementrị os iji rụkwaa ngwugwu agbajiri agbaji, na ihe niile emerela n'ụzọ ziri ezi, melite ngwa, distro na site na njedebe na ọnọdụ mgbake ọ dị ka enweghị nsogbu, mgbe ị na-ebighachi ịbanye usoro ahụ, ọ ka na-adị na logo nke Elementary, anaghị amalite interface 🙁 Amaghị m ihe m nwere ike ime iji weghachite ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụrụ na ọ nwere ike, ma ọ bụ otu esi etinyeghachi os os, enwere m ọnwa ole na ole na-eji linux, ma eleghị anya, mfewo nzọụkwụ dị mkpa ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ya mere m ji arịọ maka enyemaka ... ?
Ndewo. Enwere m ike iji ntighari na debian 9? daalụ.